ပိုးဒါလီသိန်းတန် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / ပိုးဒါလီသိန်းတန်
Category Archives: ပိုးဒါလီသိန်းတန်
ပိုးဒါလီသိန်းတန် – ရွှေလားရှိုး
01. စက်ခေါင်းအမှတ် ၀၀၉ 02. ချစ်သူ ညနေ မောင့် ညနေ 03. ခင့်အတွက်ဆို 04. အိပ်မက်ထဲမှာ အလည်လာ 05. ဝေး လဲ ဝေးပါစေ 06. သတိရ နေသူ 07. မသိလို့ လား မခင်လို့ လား 08. ကမ္မည်း သစ္စာ နှလုံးသားမှာ 09. မီးမီးလေး ငယ် လွန်းတယ် 10. ဝေးရပ်မှာ မနွမ်းစေချင်သူ 11. တိမ်လှိုင်းပမာ မရေရာ 12. ဘယ်လိုလည်း မချော 13. မိန်းကလေးတို့ အလှ 14. ရင်ထဲ ကဆန္ဒ 15. သစ္စာ ချစ်စကား 16. နှုတ်ဆက်ခဲ … Continue Reading →
March 28, 2013 Snuo Mwoani ပိုးဒါလီသိန်းတန် Leaveacomment
ပိုးဒါလီသိန်းတန် – ရွှေရင်တံခါး
01. ပန်းကမ္ဘာမျှော်စင် ကိုသက်မှူး 02. အပြုံးကိုဆောင် ပန်းတနော် လေးမြ 03. ရွှေရင် တံခါး မောင်ယဉ်မော် 04. ချစ်သူတို့ဘ၀ဝယ် စန္ဒရားချစ်မောင် 05. စံပယ် လိုလို နှင်းဆီ လိုလို စန္ဒရားငွေစိုး 06. မောင့် ချစ်စကား မောင်ဆွေမွန် 07. ချယ်ရီပန်း မခူးရ ကိုလေးညွန့် 08. မေတ္တာ ပန်းများခြွေခူးထားတယ် ကိုမြတ်လင်း 09. အစ်ကို ရယ် စဉ်းစားပါ ကိုလေးလွင် 10. ရွှေလက်မြဲမြဲ တွဲပါချင် လှမျိုးသွင် 11. နွဲ့မျိုးစုံ ကိုရဲအောင် 12. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် စန္ဒရားထွန်းညွန့် http://www.mediafire.com/?2rp2fydn3ufbg37 Credit – Ko Aung Myin … Continue Reading →
March 22, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ပိုးဒါလီသိန်းတန် Leaveacomment
ပိုးဒါလီသိန်းတန် – မီလျှံနာ
ပိုးဒါလီသိန်းတန် … မီလျှံနာ တေးရေး ………… ညွှန့် လှိုင်လှိုင် တေးဂီတ ………..NEW WAVE အသံဖမ်း ……….. တိုနီ ၊ လင်း ၊ မူပိုင် ……………. ရတနာ ဆုလှိုင် ခုနှစ် ……………. ၁၉၉၅ ၀၁ မျက်လုံးလေးကြောင့်ခက်ပါတယ် ၀၂ ရင်ခုန်ဖက် ၀၃ မင်းက တို့ ရည်းစားလား ၀၄ မီလျှံနာ ၀၅ နှလုံးသား အစစ်နဲ့ချစ်ရအောင် ၀၆ စင်ကာပူ အချစ် ၀၇ တို့ အကြိုက် ၀၈ ချစ်သူ ၀၉ အသည်းကောင်းလို့ ပွဲတောင်းတာလား ၁၀ ချစ်တာ ချစ် လို့၁၁ … Continue Reading →
ပိုးဒါလီသိန်းတန် – အချစ်အိပ်မက်
01. အချစ် အိပ်မက် 02. ဒေါသစိတ်ကလေး ၃၆၀ 03. အမှတ်တရ 04. မိုးလေးချုပ်တော့ လိုက်ပို့ ကွယ် 05. ရင်ထဲ ကထူး 06. ကိုကိုမကောင်းဘူး 07. ရေယာဉ်လှိုင်း 08. ဘယ်ရည်းစား ကို အချစ်ဆုံးလဲ 09. ကိုယ် မင်းနဲ့ မခွဲနိုင်ဘူး 10. မ နဲ့ မောင် 11. အသည်းကွဲ ကဗျာ 12. ပုဆိုး နဲ့ တိုက် ပုံ ၀တ်လာပါ 13. အပြာလား အ၀ါလား 14. ချစ်လူဆိုး http://www.mediafire.com/?q8rqu9sc8d5f93v Credit – Ko Aung Myin Ohn
၀၁။မယုံတော့ဘူး ၀၂။အစွန်းနှစ်ဖက် ၀၃။နှုတ်ခမ်းနီမ ၀၄။အမေဆူတယ် ၀၅။တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ၀၆။ခေါ်နေသံကြားလား ၀၇။ကိုကိုသိသားနဲ့ ၀၈။ပျော်ရွှင်စွာလက်ခုပ်တီးကြပါ ၀၉။အလွမ်းမီးလေးငြိမ်းမပစ်နဲ့၁၀။အောက်ချင်းငှက်ပြော ၁၁။ကိုယ့်ဘ၀ မင်းဘ၀ ကိုယ့်အချစ် မင်းအချစ် ၁၂။ကိုယ့်အချစ်ကိုသာအားကိုးပါ ၁၃။စိတ်ရှင်းရှင်းထား ၁၄။စွဲစွဲလမ်းလမ်းစိုးစိုးထိတ်ထိတ်
November 2, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ပိုးဒါလီသိန်းတန် Leaveacomment
01 ။ မိုးညို့ညို့လွမ်းသူ့ရင်ခွင် 02 ။ ဟန် 03 ။ တိုးတိတ်တမ်းတ 04 ။ နောက်မကျသေးဘူး 05 ။ ပျောက်ကွယ်မသွားဘူး 06 ။ ပိတ်ထားတဲ့ရင်ခွင်တံခါး 07 ။ အဆုံးမရှိတဲ့အလွမ်းမြစ် 08 ။ သွေးရောင်ချည်အချစ် 09 ။ ရေစုန်မျောတဲ့အချစ် 10 ။ သိက္ခာပန်းခင်း 11 ။ အသေချာဆုံးအချစ်နဲ့စောင့်နေဦးမယ် 12 ။ ရင်ခုန်သူကွက်လပ် 13 ။ နွေရက်ကလေးများအကြောင်း 14 ။ အိပ်မက်ကလေး လမ်းဓါတ်မီးမှောင်ပြီ Album Cover နှင့်သီချင်းနာမည်လေးများ mma မှပို့ပေးပါသည်။ mma အား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
July 28, 2010 Yee Wai Aung အခွေ (တကိုယ်တော်) ပိုးဒါလီသိန်းတန် ပိုးဒါလီသိန်းတန်3Comments